Ciidamada Jabuuti”Amisom oo qaati kale taagan”Xog Culus” - iftineducation.com
Ciidamada Jabuuti”Amisom oo qaati kale taagan”Xog Culus”
Ayadoo maalinimada Shalay magaalada muqdisho soo gaareyn ciidamo kasocda dalka jabuuti kuwaas oo kadhashay muran aad u xoogan gobtii ay dagi lahayeen waxana soo kale dhex galay Ra’isulwasaaaraha dowlada soamliya.
Ciidamada jabuuti aya qorsheynaayo in lawaregaan Garoonka iyo Dekada magalaada muqdisho madaama shacabka ree Soomaaliyeed isfahmayaaan madaama ay yihin dad isku Af ah oo walaaloyihin waxa arinkaas kabiya diiday saraakiisha ciidamada Amisom.
Saraakiisha Ciidamada AMISOM ee Muqdisho jooga ayaa Saraakiisha Ciidamada Jabuuti ku wargaliyay in Ciidamadan todobaad nasasho ah kadib la geenayo Jiidaha Dagaalka gaar ahaan Degmada Dayniile oo looo baahan yahay ciidamo Xoojiya kuwa Burundi.
Hadalkaasi ayaana waxaa kasoo horjeestay Saraakiisha Ciidamada Jabuuti oo sheegay in eesan suurto gal ahayn arintaasi qorshahoodana uu yahay in ee Waaardiyeeyaan lana wareegaan amaanka Garoonka Aadan Cadde iyo Dakada Magaalada Muqdisho taa ee kacodsaya Dowlada KMG ee Soomaaliya.
Saraaakiisha Amisom aya ku wargeliyeen Madaxda dowlada in ciidamadaan lageen doono Degmada dayniile oo halkaas kuxooganyiin Kooxda shabaab mujaahiidiin isla marka aana ku wareeji doonin Airport iyo dekada.
Ciidamada Ugandha ee jooga Garoonka iyo Dakada ayana arintaasi kasoo horjeestay kuwaa oo sheegay in eesan ka baxeyn Garoonka iyo Dakada Ciidamada Jabuutina muhiim tahay in markooda xabada arkaan oo Jiidaha Dagaalka la geeyo.
Si kastaba ha ahaatee Xaalada ayaana ah mid wali cakiran waxaana Ciidamada Jabuuti si KMG ah hada loo dajiyay oo Xalay ku hoydeen Xerada ugu Weyn Ciidamada AMISOM ee Xalane halkaas oo Maalmahan sii joogi doonaan.
Maxkamad Xukun ka soo saartay Haweenay Saygeedi u Qarisay AIDS
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 12-aad